Oke ohia ato nke Spain ga - abu ulo ogwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke ohia ato nke Spanish ga abu ulo ogwu
Studmụ banyere mmetụta nke mgbanwe ihu igwe, ma n'obodo mepere emepe, dị ezigbo mkpa mgbe ị na-eme amụma mmegharị. Maka ya, oke ohia ato di na mmiri peninsula ga-agbanwe n'ime ulo oru ihe omumu nke otu afo inwe ike inyocha na ịmụ banyere mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na adịghị ike nke ọhịa pine na Spain.
Iji mee ka oke ohia na gburugburu ebe obibi gbanwee maka mgbanwe ihu igwe, ọmụmụ ha na nyocha ha dị mkpa. Youchọrọ ịmatakwu banyere ihe ọmụmụ a ga-eme n'ime ọhịa anyị?
1 Oke ohia dika ulo ogwu
2 Ohere nke Netura 2000 Network
Oke ohia dika ulo ogwu
Oké ọhịa nke Valsaín (Segovia), Cazorla (Jaén) na Barrantes (Pontevedra), nke di na elu ugwu di iche-iche ma nwekwa onodu ubochi di iche iche, ka ahoputara iji meputa oru ngo ga-enyocha ihe ndi metutara gburugburu ya na otu esi etinye oru ndi n’enye aka ibelata nsogbu ha n’ebe mgbanwe ihu igwe di.
Osisi atọ ndị a ahọpụtara maka nyocha ahụ bụ ndị FSC gbaara. Nke a bụ akara nke kwadoro ha dịka ugwu ndị a na-achịkwa n'ụzọ ziri ezi na njikwa ya kwekọrọ na nchekwa nke akụ na ụba na ụdị dị iche iche.
Onye ntụzi ọrụ aka nke FSC, Silvia Martínez, egosila na nkwubi okwu a ga-enweta na nyocha nke mgbanwe ihu igwe n'ọhịa ndị a. meziwanye njikwa nke oke ọhịa maka ịmegharị ka mma. Ọzọkwa, site na nsonaazụ ndị enwetara, ọ bụghị naanị na enwere ike itinye atụmatụ mmegharị na oke ọhịa ahọpụtara, mana enwere ike ịmịnye ha na mpaghara ọhịa niile.
Ohere nke Netura 2000 Network
Oghere atọ ndị a họọrọ na-apụta maka ezigbo njikwa ọhịa nke emere na ha na akụkọ ihe mere eme na maka ịbụ ebe atụ na ebe a ma ama. Ugwu Valsaín dị na Sierra de Guadarrama National Park; Ugwu Navahonda na Sierras de Cazorla, Segura na Las Villas Natural Park; na ugwu nke Barrantes bu "agbata obi na aka aka", onu ogugu ndi gbanyere mkpọrọgwụ na omenala ndi Galician ma buru nkpebi site na echiche ndi mmadu, nke aku na uba na nke gburugburu ebe obibi.
Na mgbakwunye, Valsaín na Navahonda so na ndepụta nke Network nke Ebe Echebe Echebe, Nature 2000.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Oke ohia ato nke Spanish ga abu ulo ogwu
Kedu ihe bụ snow donuts na otu esi akpụ ha?
Mystergwé ojii dị ebube nke ụtụtụ na ihe kpatara ha